Nagu saabsan - Shijiazhuang Haitian Amino Acid Co., Ltd.
Pls booqo bartayada rasmiga ah adoo gujinaya: Jirong Pharmaceutical Co., Ltd. Haitian Amino Acid Co., Ltd.
Xakamaynta amino acid
Shijiazhuang Haitian Amino Acid Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2003. Waa shirkad ikhtiraac casri ah oo wax soo saar ku takhasustay soo saarista amino acids (fasalka cuntada & fasalka dawooyinka), cuntada lagu daro iyo dhexdhexaadiyaasha daawada.
Aqoon isweydaarsigayaga wax soo saar waxaa loo dhisay si waafaqsan heerarka GMP, oo leh qalab wax soo saar horumarsan, qalab gorfeyn casri ah iyo nidaam maamul oo hagaagsan. Waxay heshay shahaadooyin badan oo ay ka mid yihiin liisanka wax soo saarka (SC), ISO22000, ISO 9001: 2015, HACCP, Kosher, Halal, iwm Tayada wax soo saarkeenu waa mid heer sare ah oo aad u fiican. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha CP, USP, EP, BP, AJI, FCC iyo heerarka kale ee gaarka ah ee macaamiisha sare.
In si joogto ah loo hagaajiyo awoodda hal-abuurnimo, shirkadda ayaa had iyo jeer ku dhagan fikradda horumarinta ee "wax soo saarka, waxbarashada iyo cilmi baarista". Sanado badan, waxay ilaalinaysay wada shaqeyn dhow jaamacado badan iyo machadyada cilmi baarista, iyadoo si joogto ah loo hagaajinayo tiknoolajiyada wax soo saarka. Haitian Amino Acids waxay sii waddaa inay kordhiso maalgashiga R & D, kuna dardar galiso xawaare isdaba-joog ah shirkadda hal-abuurkeeda iyo horumarinteeda.
Iyagoo ku tiirsan tayada wax soo saar tayo sare leh iyo adeeg tayo sare leh, Haitian amino acid waxsoosaarkooda ayaa loo dhoofiyay in kabadan 80 wadan iyo gobalo ay kamid yihiin Europe, Mareykanka, Japan, Korea, IWM waxayna ku guuleysteen amaan balaaran!
Haitian amino acid, Ku dadaalida xirfadda caafimaadka aadanaha.